Rooble oo qabtay Shirka Sixitaanka Doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo qabtay Shirka Sixitaanka Doorashada
Waxa uu kulanka imaanayaa xili laga rajo dhigay doorashadda uu mas'uulka ka yahay Rooble, taasoo la marsiiyay dariiq qaldan, oo dalka galiyay xaalad murugsan oo hubanti la'aan ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib cadaadis uga yimid Midowga Musharixiinta, Rooble ayaa xalay aaladda ZOOM-ka ku qabtey Shir looga hadlay sixitaanka doorashadda la afduubey.
Shirka oo ay ka qeyb-galeen qaar kamid ah Musharixiinta, Madaxda shanta Maamul Goboleed, duqa Muqdisho iyo Gudoomiyaha Gudiga doorashadda FEIT, iyadoo laga wada-hadlay cabashada ka timid doorashadda kuraasta Baarlamaanka 11-aad.
Musharixiinta oo ay ku matelayeen shirka Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo C/raxmaan Cabdishakuur ayaa soo bandhigay qaabka lagu sixi karo qaladaadka doorashadda, iyagoo soo jeediyay in marka hore la kala diro Gudiga Xalinta Khilaafaadka doorashadda iyo in la helo daah-furnaan.
Waxay madaxda isku mari waayeen qodobada Musharixiinta soo jeediyeen, iyagoo ku balamay inay isugu yimaado kulan looga arrinsanayo sidii loo xalin lahaa tabashooyinka jira, waxaana meesha laga saarey dalabkii mucaaradka ee ahaa in la joojiyo doorashadda dalka, oo sidii lagu heshiiyay si ka duwan loo wado.
Wajiga hore ee kulanka waxa warbixin laga dhageystay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal kaas oo faahfaahin ka bixiyay dib u dhacyada ku yimid jidwalka doorashooyinka, hufnaanta doorashada iyo wadashaqeynta ay uga baahan yihiin Madaxda Dowlad Goboleedyada," ayaa lagu yiri qoraal Rooble xafiiskiisa soo saarey.